Nei yangu Apple Inotarisa Bhatiri Richifa Zvikurumidza? Heino Kugadzirisa! - Apple Tarisa
ipad yakanamatira pane apple screen
ipad 2 haikunde kutanga
app chitoro hachiwanikwe pane iphone
chitoro cheApple iphone 5
Nei Apple Yangu Inotarisa Bhatiri Inofa Nokukurumidza? Heino Kugadzirisa!
Wakaodzwa mwoyo neupenyu hwako hweApple Watch bhatiri uye iwe unoda kuita kuti igare kwenguva refu. Muchikamu chino, Ini ndichatsanangura kuti nei yako Apple Watch bhatiri ichifa nekukurumidza uye kukuratidza maitiro ekugadzirisa yako Apple Watch kuti iwedzere hupenyu hwayo hwebhatiri !
Hupenyu hwebhatiri reApple Watch Series 3 hwakagadzirirwa kupedza maawa gumi nesere pachikwereti chakazara, asi isu hatigare munyika yakakwana. Zvirongwa zvisina kugadziriswa, kupunzika kwesoftware, uye zvinorema maapplication zvinogona kukonzeresa kukosha kweApple Watch bhatiri.
Pane Chinhu Chisina Kumira Neangu Apple Kutarisa Bhatiri?
Ini ndoda kujekesa imwe yeakanyanya kusanzwisisika kana zvasvika kune Apple Tarisa bhatiri nyaya: ingangoita 100% yenguva, yako Apple Watch bhatiri rinofa nekukurumidza nekuda kwe software nyaya , kwete zvinhu zvehardware. Izvi zvinoreva kuti pane mukana we99% wekuti hapana chakaipa nebhatiri rako reApple Watch uye haufanire kuwana bhatiri rinotsiva Apple Watch!
Muchikamu chino, ndinotarisa pamazano ebhatiri eWatchOS 4, vhezheni ichangoburwa yeApple Watch software. Nekudaro, aya matipi ebhatiri anogona kuiswa kune Apple Watches anomhanya apfuura mavhezheni eWatchOS.
Pasina imwezve ado, ngatitangei nechinhu chakajairika icho vanhu vazhinji vasinga zive chiri kudonhedza yavo Apple Watch hupenyu hwebhatiri: Wake Screen pane Wrist Simudza.
Dzima Wake Wake Screen Pane Wrist Simudza
Iko yako Apple Watch inovhura nguva dzese paunosimudza ruoko rwako? Imhaka yekuti chimiro chinozivikanwa se Wake Screen pane Wrist Simudza yakavhurwa. Iyi ficha inogona kutungamira kune makuru Apple Watch Series 3 bhatiri hupenyu hwekudonha sezvo chiratidziro chinoramba chichivhura nekudzoka.
Semunhu anoita basa rakawanda remakomputa, ini ndakabva ndadzima chimiro ichi mushure mekuona yangu Apple Watch kuratidza iripenya nguva dzese pandinogadzirisa mawoko angu ndichitaipa kana kubhurawuza internet.
Kudzima Wake Screen pane Wrist Simudza , vhura iyo Zvirongwa app pane yako Apple Watch uye tinya General -> Wake Chinovhara . Pakupedzisira, bvisa switch iripedyo ne Wake Screen pane Wrist Simudza . Iwe uchaziva kuti iyi seti yadzimwa kana switch iri grey uye yakamiswa kuruboshwe.
Vhura Simba Kuchengetedza Maitiro Paunenge Uchishanda Kunze
Kana iwe uchigara uchirovedza muviri uchipfeka yako Apple Watch, kuvhura Power Saving Mode inzira iri nyore yekuchengetedza pahupenyu hwebhatiri. Nekushandura chimiro ichi, iyo yemoyo sensor inodzimwa uye kuverenga macalorie Chivabvu kuve wakanyatsojeka kupfuura zvakajairwa.
Neraki, ingangoita ese emuchina we cardio kunzvimbo yako yemukati yekurovedza muviri kana yehutano nzvimbo yakavakira-mukati yemoyo maseru sensors uye monitors. Mune ruzivo rwangu, moyo wekutarisa monitors pane yemazuva ano cardio michina ingangoita nguva dzose seyakajeka seiyo iri yako Apple Watch.
Ndakaedza izvi kakati wandei kuPlanet Fitness yangu yemuno ndikaona kuti kurova kwemoyo wangu kwakateedzerwa paApple Watch yangu yaigara iri mukati me1-2 BPM (kurova paminiti) yemoyo wangu wakateedzerwa pane elliptical.
Kuti uvhure Power Saving Mode yeiyo Workout app, enda kune iyo Zvirongwa zveapp pane yako Apple Watch, pombi General -> Workout , uye batidza switch iripedyo ne Power Saving Mode . Uchaziva kuti switch iripo kana iri green.
Tarisa uone Chiitiko Mune Yako Workout App
Kana iwe uchangobva kushanda kunze, ipfungwa yakanaka kutarisa iyo Workout app kana yako yechitatu-bato kugwinya app kuti uone kana ichiri kumhanya kana kumbomira basa. Iko kune mukana wekuti yako fitness app ichiri kumhanya pane yako Apple Watch, iyo inogona kunge ichimhanyisa bhatiri rayo nekuti iyo yemhando yemagetsi sensor uye calorie tracker ndeaya maviri makuru ebhegi hogi.
Kana iwe ukashandisa iyo Workout app sezvandinoita kana ndiri kumitambo yekurovedza muviri, gara uchiyeuka kutepa End mushure mekupedza kurovedza muviri. Ini chete ndine zvishoma ruzivo nevechitatu-bato kusimba maapplication, asi iwo andakashandisa ane akafanana interface kune yakavakirwa-mukati Workout app. Ndingafarire kunzwa kubva kwauri muchikamu chemashoko pazasi nezve app yehutano yaunoshandisa!
Dzima Rutivi Rwekumashure App Refresh Kune Mamwe Ezvako Zvirongwa
Kana Background App Refresh yakavhurwa yeapp, iyo app inogona kurodha nhepfenyuro nyowani uye zvemukati uchishandisa maseru data (kana yako Apple Watch iine maserura) kana Wi-Fi kunyangwe iwe usiri kuishandisa. Nekufamba kwenguva, ese madiki kurodha pasi anogona kutanga kudurura yako Apple Watch Series 3 bhatiri hupenyu.
Enda kuWatch app pane yako iPhone, wobva wadzvanya General -> Yenharaunda App Refresh . Pano iwe uchaona runyorwa rweese maapplication akaiswa pane yako Apple Watch.
Imwe-ne-imwe, dzika pasi runyorwa uye uone kana iwe kana kwete iwe uchida kuti yega yega app igone kurodha nyowani midhiya uye zvemukati kana usiri kuzvishandisa. Usanetseka - hapana mhinduro dzakarurama kana dzisina kunaka. Ita zvakakunakira iwe.
Kuti ubvise Background App Refresh kuti ive yeapp, tinya switch kurudyi kwayo. Iwe uchaziva kuti switch yakadzimwa kana yaiswa kuruboshwe.
Apple inowanzoburitsa inogadziridza yeOSOS, iyo software inoshanda sisitimu yeApple Watch yako. Zviono zveWatchOS dzimwe nguva zvinogadzirisa madiki software madhiragi ayo anogona kunge achimhanyisa hupenyu hwebhatiri reApple.
Usati wagadzirisa, ita shuwa kuti yako Apple Watch yakabatana kune yeWi-Fi network uye ine 50% yehupenyu hwebhatiri. Kana yako Apple Watch iine isingasviki 50% yehupenyu hwebhatiri, iwe unogona kuiisa pane yayo charger paunenge uchiita iyo yekuvandudza.
Kuti utarise wongororo yeWOSOS, vhura iyo Watch app pane yako iPhone uye tora General -> Software Kwidziridza . Kana inogadziridza iripo, pombi Dhawunirodha uye gadza . Yako Apple Watch ichatora iyo yekuvandudza, isa iyo yekuvandudza, wobva watangazve.
Batidza Kuderedza Motion
Iyi yekuchengetera bhatiri-inoshanda kune yako Apple Watch pamwe neako iPhone, iPad, uye iPod. Nekutendeuka neReduce Motion, mamwe e-e-screen animations aunowanzoona kana iwe uchifamba uchitenderera yako Apple Watch kuratidza ichadzimwa. Aya maratidziro akajeka, saka unogona kusatomboona mutsauko!
Kuvhura Reduce Motion, vhura iyo Zvirongwa zveapp pane yako Apple Watch uye tap Zvakajairika -> Kuwanikwa -> Deredza Motion uye batidza switch iripedyo neReduce Motion. Iwe unozoziva kuti Reduce Motion iripo kana switch iri green.
Limit Apple Ratidza Ratidza Wake Nguva
Nguva dzese iwe paunobata kuti umutse kuratidzwa kweApple Watch yako, iyo inoratidzira inoramba iripo kwenguva yakatarwa yenguva - ingaite 15 masekondi kana 70 masekondi. Sezvaungave wafungidzira, kumisikidza yako Apple Watch kuWake kwemasekondi gumi nemashanu panzvimbo pemasekondi makumi manomwe kunogona kukuchengetedza hupenyu hwakawanda hwebhatiri mukufamba kwenguva uye kunogona kuchengeta yako Apple Watch bhatiri kubva mukufa nekukurumidza.
Enda kuZvirongwa zveApple pane yako Apple Watch uye tap General -> Wake Chinovhara . Wobva wapeta nzira yose kusvika ku PaTepa submenu uye ita shuwa kuti pane cheki chiratidzo padyo ne Muka kwemasekondi gumi nemashanu .
Mirror Yako iPhone's Mail App Zvirongwa
Kana iwe waverenga chinyorwa chedu pa inowedzera hupenyu hwebhatiri re iPhone , iwe unozoziva kuti iyo Meseji app inogona kuve imwe yemadhizaini makuru pane bhatiri rayo. Kunyangwe iyo Custom Mail mameseji ezvirongwa chikamu cheWatch app isina kunyatsoita, yako Apple Watch inoita kuti zvive nyore kuratidzira iwo maratidziro eemail kubva ku iPhone yako.
Kutanga, tarisa pane yedu iPhone bhatiri chinyorwa uye gadzirisa iwo Maapplication marongero pane yako iPhone. Wobva wavhura iyo Watch app pane yako iPhone uye tap Tsamba . Ita shuwa kuti pane diki cheki chiratidzo padyo ne Mirror yangu iPhone .
Vhara Zvirongwa Zvausingashandisi
Iyi nhanho inogona kuve ine gakava nekuti vanhu vazhinji havatendi chaizvo kuti kuvhara kunze kwemaapps avasiri kushandisa kunochengetedza hupenyu hwebhatiri. Nekudaro, kana iwe ukaverenga chinyorwa chedu pa nei uchifanira kuvhara kunze kwemaapp , iwe uchaona kuti chaizvo unokwanisa ponesa hupenyu hwebhatiri pane yako Apple Watch, iPhone, uye zvimwe Apple zvigadzirwa!
Kuti uvhare kunze kwemaapplication paApple Watch yako, tinya bhatani reSide kamwe kuti utarise ese maapplication ayo avhurika parizvino. Rova zvakasimba kurudyi kuruboshwe pane iyo app yaunoda kuvhara kunze kwayo, wobva wadzvanya Bvisa kana iyo sarudzo ikaonekwa pakuratidzwa kweApple Watch yako.
Dzima Zvisingakoshe Push Notifications
Imwe nhanho yakakosha mune yedu iPhone bhatiri chinyorwa kudzima Push Notifications yemapurogiramu kana iwe usingade iwo. Kana Push Notifications dzikavhurwa kuti dzive app, iyo app ichagara ichimhanya kumashure kuitira kuti ikwanise kukutumira pakarepo zviziviso. Nekudaro, sezvo iyo app ichigara ichimhanya kumashure, inogona zvakanyanya kudurura hupenyu hwebhatiri yeako Apple Watch.
Enda kuWatch app pane yako iPhone, tora iyo Yangu Yekutarisa tebhu pazasi pechiratidziro, uye tora Notifications . Pano iwe uchaona runyorwa rweese maapplication pane yako Apple Watch. Kuti udzime Push Notifications yeimwe purogiramu, tapira pairi mumenu ino uye bvisa chero shanduko dzakakodzera.
Iyo yakawanda yenguva, ako maapplication anozozvigadzirirwa otomatiki kuratidzira iwo marongero pane yako iPhone. Kana iwe uchida kuchengeta Push Notifications pane yako iPhone, asi vadzime paApple Watch yako, ita shuwa kuti Tsika sarudzo inosarudzwa mu Tarisa app -> Notifications -> Zita reApp .
Wedzera Nziyo KuApple Yako Tarisa Raibhurari Panzvimbo Yekutenderera
Kutenderera mimhanzi pane yako Apple Watch ndeimwe yeakanyanya uye akajairika anodhiraina bhatiri. Panzvimbo pekushambadzira, ini ndinokurudzira kuwedzera nziyo idzo dzatove pane yako iPhone kune yako Apple Watch. Kuti uite izvi, vhura iyo Watch app pane yako iPhone, tinya iyo Yangu Yekutarisa tebhu , wobva wadzvanya Mumhanzi .
Kuti uwedzere mimhanzi kune yako Apple Watch, iyo Wedzera Mimhanzi… pasi Pekutamba & MaAlbum. Paunowana rwiyo iwe rwaunoda kuwedzera, tinya pairi uye ichawedzerwa kune yako Apple Watch. Kana yako Apple Watch bhatiri ikafa nekukurumidza, izvi zvinofanirwa kukwanisa kubatsira.
p & g kopani bhuku
Shandisa Simba Renzvimbo Kana Apple Tarisa Hupenyu Hupenyu Hwakadzikira
Kana yako Apple Watch iri kushomeka pahupenyu hwebhatiri uye iwe usingawani nekukurumidza kune charger, unogona kubatidza Power Reserve kuchengetedza Apple Watch hupenyu hwebhatiri kusvikira iwe uine mukana wekuchaja zvakare.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti kana Power Reserve yakavhurwa, yako Apple Watch haizotaure ne iPhone yako uye ucharasikirwa nekuwana kune zvimwe zveako Apple Watch maficha.
Kuvhura Power Reserve, swipe kumusoro kubva pasi pechiratidzo chako cheApple Watch uye tinya pane bhatiri muzana bhatani mukona yekumusoro yekuruboshwe. Tevere, swipe iyo Power Reserve inotsvedza kubva kuruboshwe kuenda kurudyi uye tinya iyo green Enderera bhatani.
Dzima Yako Apple Tarisa Kamwe Kwese Svondo
Kudzima yako Apple Watch kanokwana kamwe pasvondo kuchabvumidza ese mapurogiramu anomhanya pane yako Apple Watch kuti avhare zvakajairika. Izvi zvine mukana wekugadzirisa zvidiki zve software zvinoitika kumashure izvo zvinogona kukanganisa yako Apple Watch Series 3 bhatiri hupenyu iwe usingazvizive.
Kudzima yako Apple Watch, tinya uye bata Bhatani bhatani kusvikira iwe waona iyo Power Off inotsvedza inoratidzika kuratidzwa. Shandisa munwe wako kutsvedza iyo tsvuku simba icon kubva kuruboshwe kuenda kurudyi kudzima yako Apple Watch. Mirira anenge 15-30 masekondi usati wadzosera yako Apple Watch kumashure.
Chinyorwa cheApple Watch Series 3 GPS + Cellular Users
Kana iwe uine Apple Watch ine GPS + Cellular, yako Apple Watch's Series 3 hupenyu hwebhatiri huchave zvakanyanya kukanganiswa nekuwanda kwaunoshandisa iko kubatana kwayo kwemaseru . Apple Watches ine Cellular ine imwe antenna inoibatanidza kune masero eshongwe. Kugara uchibatanidza kune iwo maseru eshongwe kunogona kutungamira kune rinorema bhatiri dhureni.
Kana iwe uchinetseka nezvekuchengetedza hupenyu hwebhatiri uye kucheka padanho rako re data, ingoshandisa data kana uchifanira uye uve nechokwadi chekudzima Cellular Voice neData pane yako Apple Watch kana uine yako iPhone newe. Kuita kufona newachi inzira inotonhorera yekuratidza shamwari dzako, asi hazviwanzo kushanda kana kudhura.
Dzinga & Pair Yako Apple Tarisa Kune Yako iPhone Zvakare
Kurega uye kubatanidza yako Apple Watch kune yako iPhone zvakare kunopa ese maviri madhivhoni mukana wekubatana zvakare senge nyowani. Maitiro aya dzimwe nguva anogona kugadzirisa zviri pasi pesoftware nyaya dzinogona kunge dzichikonzera yako Apple Watch Series 3 hupenyu hwebhatiri.
Ongorora: Ini ndinongokurudzira kuita danho iri mushure mekunge maita iwo matipi ari pamusoro. Kana bhatiri rako reApple Watch richiri kufa nekukurumidza mushure mekutevera iwo matipi ari pamusoro, ungangoda kukatanura uye kubatanidza zvakare yako Apple Watch kune yako iPhone.
Kuti usanganise yako Apple Watch ne iPhone, vhura iyo Watch app pane yako iPhone uye tinya zita reApple Watch yako kumusoro kweiyo Wangu Kutarisa menyu. Tevere, tinya iro bhatani reruzivo (tsvaga orenji, denderedzwa i) kurudyi kweako maviri pairi Apple Watch muWatch app. Pakupedzisira, tapira Unpair Apple Kutarisa kuti ubvise michina miviri.
Usati wabatanidza yako iPhone kuApple Watch yako zvakare, ita shuwa kuti Bluetooth neWi-Fi zvese zvabatidzwa uye kuti wakabata zvese zvishandiso padyo nepadhuze.
Tevere, tangazve yako Apple Watch uye mirira iyo 'Shandisa iyi iPhone kumisikidza yako Apple Watch' yambiro kuti pop-up pane yako iPhone. Wobva watevera iyo-skrini mirayiridzo yekupedzisa kubatanidza yako Apple Watch kune yako iPhone.
Dzosera Apple Yako Watch
Kana iwe wakashanda kuburikidza nhanho dzese dziri pamusoro, asi iwe waona kuti yako Apple Watch Series 3 hupenyu hwebhatiri huchiri kufa nekukurumidza, ungangoda kuedza kuidzorera kune zvisirizvo zvefekitori. Paunoita izvi, ese marongero uye zvemukati (mimhanzi, maapplication, nezvimwewo) zvichabviswa zvachose kubva kuApple Watch yako. Zvichava sekunge iwe uri kuzviburitsa mubhokisi kekutanga.
Kuti udzorere yako Apple Tarisa kune zvakashata zvefekitori, vhura iyo Zvirongwa app uye tap General -> Seta zvakare uye tapira Bvisa Zvese Zvirimo uye Zvirongwa . Mushure mekubata yambiro yekusimbisa, yako Apple Watch ichagadzirisa kune zvisizvo zvefekitori uye wotangazve.
Ongorora: Mushure mekudzorera yako Apple Watch, uchafanirwa kuibatanidza kune yako iPhone kamwe zvakare.
Sezvandambotaura pakutanga kweizvi: 99% yenguva iyo yako Apple Watch bhatiri kufa nekukurumidza, ndiwo mhedzisiro yezvinhu zve software. Zvisinei, kana iwe wakatevera nhanho dzose pamusoro uye uri zvakadaro uchisangana nekukurumidza Apple Kutarisa bhatiri kupera, ipapo izvo Chivabvu uve dambudziko rehardware.
Zvinosuruvarisa, pane chaicho chete Apple Watch yekugadzirisa sarudzo: Apple. Kana iwe uine AppleCare +, ipapo Apple inogona kuvhara mutengo wekutsiva bhatiri. Kana iwe usina kufukidzwa neAppleCare +, saka ungangoda kutarisa iyo Mutungamiriri wemitengo weApple pamberi kuseta musangano kuApple Chitoro chako .
Nei Apple Iri Rangu Rekugadzirisa Sarudzo?
Kana iwe uchigara uchiverenga zvinyorwa zvedu zvekutambudza zve iPhone, pamwe unoziva kuti isu tinowanzo kurudzira Puls seimwe nzira yekugadzirisa sarudzo kuApple. Nekudaro, mashoma makambani ekugadzira tekinoroji ari kuda kugadzirisa iyo Apple Watch nekuti maitiro acho akaoma.
Kugadziriswa kweApple Watch kazhinji kunosanganisira kushandisa microwave (zvakakomba) kupisa padhi yakakosha iyo inonyungudusa inonamira yakabata yako Apple Tarisa pamwe chete .
Kana iwe uchida kutsvaga iyo Apple Watch inogadzirisa kambani isiri Apple, ita saizvozvo panjodzi yako wega. Ndingafarire kunzwa kubva kwauri mune zvakataurwa kana iwe uine chero rombo rakanaka kutora yako Apple Watch bhatiri kutsiviwa kubva kune yechitatu-bato kambani yekugadzirisa.
Nditarise Sevha Bhatiri Hupenyu!
Ndinovimba ichi chinyorwa chakakubatsira iwe kunzwisisa izvo chaizvo zvikonzero nei yako Apple Watch bhatiri kufa nekukurumidza. Kana zvadaro, ndinokukurudzira kuti uzvigovane neshamwari dzako uye mhuri pasocial media. Inzwa wakasununguka kusiya chirevo pasi pazasi uye undizivise kuti matipi aya akashanda sei kwauri!